IiNanoparticles zesilivere, iCopper Nanoparticle, iiManotubes zeCarbon ezininzi eziDibeneyo- Hongwu
Iimpawu zegolide zeNanoparticles
Intsimbi exabisekileyo Colloidal
UNano Graphene oxide GO
UNano C60 iFullerene
Ubunzima beNano Diamond
I-Carbon Nanotubes yeeDonga ezininzi
I-Carbon Nanotubes engadibeneyo
I-Carbon Nanotubes ebiyelweyo
Amanqwanqwa amaninzi e-Carbon Nanotubes
Umgubo wobhedu owenziwe ngesilivere
Iimpawu zeSilicon Nanoparticles
Amanqaku eBoron Nanoparticles
Amanqaku eTantalum Nanoparticles
Iimpawu zeNiobium Nanoparticles
Iimpawu zeMetro oxide Nanoparticles
IZinc oxide Nanoparticles
Iingqungquthela ze-Cuprous oxide Nanoparticles
I-Copper Oxide Nanoparticles
IAluminiyam iOxide Nanoparticles
Titanium dioksayidi nanoparticles
IiNanoparticles zeSilicon Dioxide
I-Tungsten oxide Nanoparticles
IVanadium oxide Nanoparticles
I-Nickle Oxide Nanoparticles
I-Antimony Trioxide Iinanoparticles
IBismuth Oxide Nanoparticles
I-Iron oxide Nanoparticles
I-Tantalum Oxide Nanoparticles
I-Tin oxide Nanoparticles
I-YSZ Yttria iQinise iZirconia
I-Yttrium Oxide Nanoparticles
I-CeO2 Cerium Oxide Nanoparticles
Iinanoparticles zeBarium Titanate (BaTiO3)
I-Boron Nitride Powder (BN)
I-Titanium yeNitride Powder (TiN)
I-Aluminium Nitride Powder (AlN)
IiNanoparticles zeSilicon Nitride
Boron khabhayithi Powder (B4C)
Powder Silicon khabhayithi (β-SiC-p)
Umgubo weTitanium Carbide (TiC)
Ubunzima beTitanium Diboride (TiB2)
Iimpawu zeTungsten Carbide Nanoparticles
I-Zirconium Diboride Powder
IiNanowires zeCopper (CuNWs)
Umnxeba weNanowires (NiNWs)
Iinanotubes zeBoron Nitride
besinebhongo ukuvelisa, ukupakisha kwaye ukuthengisa Isisombululo sethu ngokwethu iminyaka emininzi.
Hongwu ungumnini igunya zophando imveliso ezine kunye nophuhliso elebhu, iziko zovavanyo, elebhu yophando isicelo kunye nesiseko uvavanyo pilot, ngokukodwa kwezorhwebo kuluhlu olubanzi nanoparticles ezingaphiliyo kunye nezinto ezintsha zenkulungwane yama-21 ukusukela ngo-2002. , Ukuveliswa kwetekhnoloji yokuvelisa izinto ezintsha, kunye nokubonelela ngesisombululo sokuqhekeka sisebenzisa ubuchwephesha be-nanomaterials, ukuzibophelela ekulungiseni ukusilela kwezinto zemveli.
hlola eyethu IINDIDI eziphambili
Unokukhetha ii-nanomaterials ezishelfini okanye uzenzele ukuba zilungele iimfuno zakho.
IZINTO EZIBALULEKILEYO ZEZIMANITI
Phumelela ngenxa yokugqwesa
iitalente kunye izinto eziphambili
Umsebenzi kaHongwu: njengomthengisi oqeqeshiweyo kwicandelo lezinto ezintsha ze-nano kunye nenkonzo enxulumene noko
Ixabiso likaHongwu: umgangatho kunye nabathengi kuqala, abathembekileyo nabathembekileyo, inkonzo yodidi lokuqala.
Ulawulo bulumko Hongwu: ulawulo seemodyuli, ukunamathela kwimarike-ebomini, ukuhlangabezana neemfuno ezifanelekileyo zabathengi uxanduva. Gxila kubuchwephesha ngokulima okunzulu kunye nokulima ngononophelo.
yintoni thina yenza
Ukubambelela kwimarike ejolise kwimarike, eyonelisayo 'yabathengi abafanelekileyo njengoxanduva lweHongwu, kugxila kushishino, kulinywa kakhulu, ukuba ngumthengisi oqeqeshiweyo kunye nomnikezeli ngenkonzo onxulumene nawo kwicandelo lezinto ezintsha, ukongeza ekunikezeleni iimveliso eziqhelekileyo, oko inokulungiswa ngokweemfuno ezithile zabathengi. Siza kuqhubeka nokuphucula umgangatho wemveliso kunye namanqanaba enkonzo, ngcono ukusebenzela abathengi bethu basekhaya nakwamanye amazwe, impumelelo yokuphumelela.
Hongwu uye izixhobo imveliso phambili, amanyathelo inkqubo phambili kunye nenkqubo yolawulo imveliso egqibeleleyo. Kwinkqubo yokuvelisa, amaxabiso apheleleyo enkampani okwenza umgangatho wokuqala ayenziwa. Ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezivelisiweyo zizinzile ngokupheleleyo.
Imodyuli yeR & D
I-Hongwu ineqela le-R & D eliqeqeshiweyo elinabaphandi abanamava be-nanotechnology kunye neenjineli eziphezulu, abafundi abagqirha, kunye noonjingalwazi kuphuhliso lweemveliso ezintsha. Kunye neZiko loPhando laseHongwu kunye neeyunivesithi njengenkxaso yezobuchwephesha, silandela ngokusondeleyo imfuno yentengiso kwaye siqhubeke nokuphuhlisa kunye nokuvelisa izinto ezintsha.
Ukusebenza kakuhle kwenkampani iyonke, sineqela lezokhuseleko eliqeqeshwe kakuhle, kubandakanya nabasebenzi, ezolawulo, ezemali, ukuthengwa kwempahla, ulungiselelo, ezomthetho, ezemali nezinye izinto ukubonelela ngokhuseleko ngokubanzi, bonke oogxa benkampani bayasebenza Sisonke, sisebenze nzima, kwisininzi ngenkxaso yabathengi abasuka ekhaya nakumazwe aphesheya, sihlala sisenza ubuqaqawuli obutsha.
Isixhobo sokufunxa umbane se-Electromagnetic Wave
yintoni yethu Abaxhasi bathi
Senze inani lemifuniselo yokuthelekisa kwaye safumana iziphumo ezanelisayo. Kungekudala isebe lethu lokuthenga liza kwenza amalungiselelo amatsha. Nceda usilungiselele i-8-10kg yomgubo wesilivere kwaye uqiniseke ukuba iyafana nomyalelo wokugqibela. Enkosi
Ifike ngokukhawuleza kakhulu kwaye inkulu impahla oza kuyisebenzisa. Okwangoku siyayivavanya kwiibhetshi zethu kwaye ukuza kuthi ga ngoku isebenza kakuhle ndiyathemba ukuba izakongeza ukhuseleko ixesha elide. Ngaba zikhona ezinye izinto ezingamanzi okanye ezomgubo onazo ezinyibilikayo kwioyile / kwisinyibilikisi / kumthwebeba oya kuthi uncede ukuphindaphinda kwamanzi esinokuwasebenzisa ecaleni komgubo we-sio2.
I-nanopowder yeZnO yangaphambili ilingana nesicelo sethu. Kwaye siza kufumana enye i-800kg. Nceda undithumelele umnikelo kuloo kunye no-2000kgs kwaye ubonise ixesha elikhokelayo. Enkosi.
I-100-200nm Si, i-3kg yokugqibela isebenza kakuhle kwisicelo sethu. Singathanda ukuqhuba i-oda ye-20kg kwinyanga ezayo, kwaye inyathelo elilandelayo liya kuba yi-100kg. Nceda ubonise elona xabiso lakho libalaseleyo, kunye nokuthumela kunye nexesha lokukhokelela kwi-20kg kunye ne-100kg, enkosi.
Ukuza kuthi ga ngoku uvavanyo lwe-Pt nanopowder lulungile, sifuna enye i-10g yovavanyo ngakumbi kunye novavanyo lwe-ASAP. Nceda uthumele i-Invoice yeProforma.
Isicelo sokusebenza esisebenza ngokuziqhelanisa neemfuno eziguqukayo. Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, sakha igama lethu kushishino kubaxumi bethu ngomgangatho ongaguquguqukiyo kunye nezisombululo ezigqwesileyo.
kutshanje iindaba kunye neebhloko
I-nanomaterials eqhubayo kunye ne-antistatic esetyenzisiweyo kwimizi-mveliso yempahla elukiweyo kunye neekhemikhali
Uphuhliso lwe-nanotechnology kunye nee-nanomaterials zibonelela ngeendlela ezintsha kunye nemibono yokuxhaphaza imveliso ye-antistatic. Ukuqhutywa, i-electromagnetic, super absorptive and broadband properties ze-nano materials, zidale iimeko ezintsha zophando kunye nophuhliso lwe-conduc ...
Nge-cesium tungsten bronze nanoparticles, ixesha lokufudumeza ngobukrelekrele lifikile!
Iglasi yokugquma ubushushu yokwaleka kulungiswe ngokuqhubekeka enye okanye izinto ezininzi ze-nano-powder. Izinto ze-nano-ezisetyenzisiweyo zineempawu ezizodwa zamehlo, oko kukuthi, banesithintelo esiphakamileyo kwimimandla ye-infrared kunye ne-ultraviolet, kunye nokuhanjiswa okuphezulu kwindawo ebonakalayo yokukhanya. Nathi ...
Izinto zeNanoparticles kunye neeCeramics zePiezoelectric
Iiceramics ze-Piezoelectric luhlobo lolwazi olusebenzayo lwezinto zeceramic ezinokuguqula amandla oomatshini kunye namandla ombane omnye komnye. Sisiphumo sepayzoelectric. Ukongeza kwi-piezoelectricity, i-piezoelectric ceramics nayo ine-dielectricity, elasticity, njl njl.
Iqela lethu liya ngaphaya kokuKunika iNanomaterial esebenzayo kunye neNkonzo eNgcono. Nxibelelana nathi namhlanje! Iinkonzo: IiNanoparticles ezixabisekileyo zentsimbi, iiNanoparticles zentsimbi, iiNetro oxide Nanoparticles, iiNanotubes, iiNanowires kunye neColloidal.
R307, Chuangkegu, No.43 Tangdong East Road, District Tianhe, Guangzhou
© Copyright - 2002-2020: Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd. Onke amalungelo agciniwe.